လူအချို့အတွက်လုပ်ပေးသည်။ သင်၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ထဲ၌စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်များကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအရာများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို, အပျြောအပါးရန်သင့်တုံ့ပြန်မှုထုံထားတဲ့, သင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲပစ်, porn နှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုရန်သင့်အား hypersensitive စေနှင့် သင့်ရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအယှက် (Self-ထိန်းချုပ်မှု) သင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမြားတှငျပွောငျးလဲမှုကြောင့်။
သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်မှီတဖြည်းဖြည်း“ ဖြတ်တောက်ခြင်း” ၏နည်းဗျူဟာသည်စွဲလမ်းမှုနှစ်ခုအတွက်သာဖြစ်သည်။ သူတို့ကကဖိန်းဓာတ်နှင့်နီကိုတင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဓာတုပစ္စည်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိပါ၊ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်နေ့လုံးအလွန်တိကျသောပမာဏဖြင့်မျိုချမိသည်။ လူတို့သည်နှစ် ဦး စလုံး၏စွဲစွဲလမ်းမှုကိုခံရသည်၊ သူတို့၏“ အဆင့်” များကိုရှာ။ ထိုတွင်နေကြသည်။
တဖြည်းဖြည်းနို့ဖြတ်တဲ့မူးယစ်ဆေးစွဲ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အဝလွန် (fattening အစားအစာ) အတွက်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဤအကအခြားစှဲစားသုံးများသောအားဖြင့်ပို့ဆောင်တင်းမာမှု-နှငျ့သငျညာဘက်ကျောကိုသင်စတင်ဘယ်မှာတက်အဆုံးသတ်။ ဖြည့်ညှင်းမကြာခဏပျက်ကွက်အဖြစ်အားလုံးအစီရင်ခံစာများကနေအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲသောဤစှဲဆင်တူသည်။ မြင် တုန်ခါမှုနှင့်အခြားအပျြောအပါး: ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမအောင်မြင်မှုများရတဲ့အခါ
သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ညနေ ၂ နာရီစီအတွက်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး အဆိုပြုထားသည့်ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားသောညစ်ညမ်းအချိန်ဇယားကိုသင်ရွေးချယ်ပါကသင်အသုံးပြုသောအချိန်တိုင်းတွင်တူညီသောအသားတူညီကိုမကြည့်ပါကညစ်ညမ်းပုံပြင်သည်မျှော်လင့်ချက်များကိုချိုးဖောက်ပြီး dopamine ကိုထိပါးစေလိမ့်မည်။ တကယ်တော့၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် dopamine ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများသည်လူ့မိတ်လိုက်ခြင်းများနှင့်ဆက်စပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီပတ်ပတ်လည်လမ်းမရှိရိုးရှင်းစွာရှိပါသည်။ အမှန်မှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုခြင်းသည်ဆေးစွဲသူများအတွက်ပုံမှန်ပုံစံဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရေးအစီအစဉ်တွင်ပင်အားဖြည့်ပေးလိမ့်မည် sensitized စွဲလမ်းကြောင်း။ လေ့လာမှုများအရမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ကိုသုံးစွဲပြီးနောက် ၇ ရက်အလိုတွင်ဆေးလမ်းကြောင်းသည်သူတို့၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုနျူကလိယ accumbens (ဆုလာဘ်စင်တာ) တွင် synaptic ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတိုးလာခြင်းဖြင့်တိုင်းတာသည်။ တနည်းအားဖြင့်တ ဦး တည်းသည်ထိုအချက်ကို ကျော်လွန်၍ မသွားပါကသူသည်ဆေးကုသခြင်း (အနာပျောက်စေသောလက္ခဏာ) မ ၀ င်ပါ။ အပတ်စဉ်စီစဉ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး သည်လာမည့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်သူတို့ကြည့်ရှုမည့်အလွန်ကြီးကျယ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားခြင်းက dopamine ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးအထိခိုက်မခံသောလမ်းကြောင်းများကိုအားဖြည့်ပေးသည်။
porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (ED, DE) နဲ့သူတို့အဘို့, အပတ်စဉ်အသုံးပြုမှုနီးပါးဆက်ဆက်ပြန်လည်နာလန်ထူတားဆီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာနေဆဲသုံးနေစဉ်တစ်ဦး erectile အစွမ်းသတ္တိကိုပြန်လည်နိုင်သည်ကိုအလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်သို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့သည့်မြင်ကွင်းသို့ဝင်ရန်ကြိုးစားနေပါကအပတ်စဉ်သို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချမှုကထိုရည်မှန်းချက်ကိုတားဆီးလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ညများရွေးလျှင်၊
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ reboot တစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအင်တာနက် porn မပါဘဲဘဝကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်။ ရုပ်ပုံထဲက porn နဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (မတရားသောမြှင့်လုပ်ဆောင်sensitized လမ်းကြောင်း) မကြာခဏအင်တာနက်ကို porn မှ ဦး ဆောင်လမ်းပြ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များအနေဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အလွန်ဆက်နွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကို (သို့မဟုတ် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်း) နှစ်ခုလုံးကိုရပ်တန့်ခြင်းပါဝင်သည်။ သင် reboot လုပ်ပြီးတာနဲ့ချိန်ခွင်လျှာကိုရှာရန်ပိုလွယ်ကူသည်။ ထိုအချိန်တွင်ရံဖန်ရံခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (porn မပါဘဲ) တစ်ချိန်တည်းတွင်အဆင်ပြေနိုင်သည်။
များသောအားဖြင့်အနာရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ပြုလုပ်သောညစ်ညမ်းသူများသည်အော်ဂဇင်အားလုံးကိုလအနည်းငယ်ကြာအောင်ရပ်တန့်စေသည်။ (သူတို့ကို PMO, porn / masturbation / orgasm-salila sex လို့ခေါ်တယ်။ ) များသောအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအချက်များပေါ် မူတည်၍ ထိုအချိန်၌တည်ငြိမ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်အသက်၊ အသက်အရွယ်စတင်သုံးစွဲမှု၊ အရှိန်မြင့်တက်လာမှု၊ အမြန်နှုန်းမြန်နှုန်းနှစ်အတန်ကြာစသည်တို့ပါဝင်သည်။ အချို့သည်ပိုမိုကြာရှည်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒါဟာအစတစ်ခုအော်ဂဇင်ပုံ အဆုံးအနီး အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏အစအဦးအနီးအပါးတစ်အော်ဂဇင်ထက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်တိုးချဲ့ဖို့အလားအလာနည်းပါသည်။
မည်သို့ပင်ဇီဝအကြောင်းပြချက်စောစောအပေါ်ကို restart နှင့်အတူလိင် / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-to-အော်ဂဇင်ရောထွေးရန်ကြိုးစားသူကိုအများဆုံးသူတို့၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူပျော်ရွှင်နေကြသည်မဟုတ်။ သူတို့အပြင်းအထန်လည်းမကြာမီ (ပင် porn မပါဘဲ) အော်ဂဇင်ကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွသောကြောင့်ထိုသို့ပြုသလော ဖြစ်နိုင်စရာ။
၎င်းသည်ဆုတ်ခွာစဉ်ကာလအတွင်းမည်သည့်စွဲလမ်းစေသည့်ပစ္စည်း / လှုပ်ရှားမှုနှင့်မဆိုစွဲလမ်းစေသောမည်သည့်စွဲလမ်းမှုနှင့်မဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြန်လည်သက်ရောက်မှုသိသိသာသာနှေးကွေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ သို့သော်လူတို့သည်အစောပိုင်းအော်ဂဇင်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်“ သုညသို့ပြန်သွားသည်” မဟုတ်ပါ။ သူတို့စွဲလမ်းသို့ပြန်ချန်မဟုတ်လျှင်အချို့သောအကျိုးအမြတ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ အစားအသောက်စွဲလမ်းသူသည်သူမအစားအစာကိုဖြတ်လိုက်လျှင်သူမကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူမအစားအစာကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သောက်လိုက်ရင်သူမဆက်လက်ဆုံးရှုံးသွားမှာပါ။
သေးသုတေသနပြုလျက်ရှိသည်အဘယ်သူမျှမ ပြန်လည်ထူထောင် ညစ်ညမ်းသူများ၏ ဦး နှောက် - သော်လည်း အခြို့သောသုတသေနပွုခဲ့သ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်အပေါ်စွဲလမ်းကိုယ်နှိုက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသထားတယ်။ နှင့်တစ်ဦးတိုးပွားလာရှိပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု.
ပို. ပင်သုတေသနပြုထားပြီး အခြား အမူအကျင့်စွဲ-ပေမယ့်အနည်းငယ်သာဘယ်လိုသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်အပေါ်ပြုမိခဲ့ပြီး recover။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ထိုအဝလွန် (အစားအသောက်စွဲသောလူ) တွင်ဦးနှောက်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ bariatric ခွဲစိတ်မှုအတွက်ရွေးချယ်သူကိုလူနာများအနက် (ကျော်ရပ်တန့်), D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့် ကိုပြု သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုအတွက်တိုး။ တစ်နည်းအားဖြင့်သူတို့အလွန်အကျွံနှိုးဆွခြင်းကိုရပ်တန့်သောအခါသူတို့၏ sensitivity (အစားအစာအပေါ်ပုံမှန်တုန့်ပြန်မှု) ပြန်ပေါ်လာသည်။ သူတို့လုံးဝမစားခဲ့ဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ သို့သော်အော်ဂဇင်ကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်အ ၀ လွန်ခြင်းရပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အား sensitivity ကိုပြန်လည်ရရှိရန်လိုအပ်သောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးသည်။ သို့ဆိုလျှင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အလွန်လျှော့ချရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့ non-orgasm လိင် အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်။ ၎င်းသည်“ အသေးစားအစားအစာများ” ကိုစားသုံးနေသည့်လူနာနှင့်တူပေလိမ့်မည်။
(သို့သော်လတ်တလောလေ့လာမှုကြောင်းအတွင်းပြသ ဆေးလိပ်သောက်နုတ်ထွက်3လအကြာသူတို့၏ D2 receptors 15 -20% တိုးတက်ခဲ့သည်။ )
အရေးအပါဆုံးအချက်ပဲပထမဦးဆုံးအဘယ်သူမျှမ PMO တစ်ရှည်ကာလကတဆင့်သွားစရာမလိုဘဲ, ရံဖန်ရံခါအော်ဂဇင်ပြန်ဖြတ်တောက်ကြောင်း, တိုးတက်မှုကိုတားဆီးနိုငျသညျ။ ပိုပြီးတွေ့မြင်များအတွက် အဘယ်ကြောင့်မတရားသော (ကအလုအယက်) နေတုန်းပဲကို restart ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်နေကြသနည်း
တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရန်လူတစ် ဦး ၏အကြံဥာဏ်များမှာ -
အကယ်၍ သင်ကရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုမသုံးနိုင်ပါကညင်ညင်သာသာသက်သက်သာသာသက်ဆိုင်သည်ဟုထင်သည်။ ဒီဆွေးနွေးမှု (အဝင် pun) တွင်ထိမိခြင်းမရှိသောအရာများကိုသတိပြုမိသည့်အရာတစ်ခုမှာဒစ်ဂျစ်တယ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (လက်ကိုအသုံးပြုခြင်း) သည်အမျိုးသားများအတွက်အခြေခံပြ,နာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါနှစ်ပေါင်း 20 နီးပါးတစ်နေ့တစ်ချိန်ကအလေ့အထပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အ ED ခဲ့ကြပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခုဒီပြaနာကိုကျွန်တော်အခုဘာကြောင့်စဉ်းစားရတာလဲဆိုတာဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ မကြာသေးမီက (လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်း) ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်မှန်မှန်တစ်ကြိမ်ကြိမ် ၄ ကြိမ်အထိတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ )
ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအပေါ်အအေးမိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြံပေးချက်သည်ဒုတိယအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn ကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်နိုင်လျှင်ကြိုးစားပါ။ 'edging' (ဖော်ပြထားသည့်ပြတင်းပေါက်အမြောက်အမြားကိုအသုံးပြုခြင်း) အရအဖြစ်အပျက်အသစ်များအကြားလှန်လှောနိုင်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတကယ့်ပြissueနာကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာနာတာရှည်လိင်လိုမျိုး၊ လိင်တံရဲ့ပွတ်တိုက်မှုနှင့်ထိခိုက်လွယ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ အတော်များများကအဝေးကိုထွက်သွားသောယောက်ျားများသည်နှစ်များတစ်လျှောက်သူတို့၏ဖိအားနှင့်နည်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုမိကြလိမ့်မည်။ ဤသည်က၎င်းတို့အားအမြန်ဆုံးအမြစ်တွယ်ခြင်းအကျင့်ကိုခံစားရန်အလျင်အမြန် jack-off သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်ကိုနှောင့်နှေးစေရန်လိုအပ်သောထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
နာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူများသည်အဆက်မပြတ် jacking off ပြုလုပ်ရန်ထိရောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်မျှသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အချက်မှာညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူအများစုအတွက်တစ်ပတ်လျှင် ၁-၂ ကြိမ်လွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဆိုပါကတကယ့်ခံစားချက်နှင့်လူတစ် ဦး အားလိင်စိတ်အပျော်အပါးလိုက်စားရန်လုံလောက်သောအရာ၏သိမြင်မှုဆိုင်ရာအမြင်များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ လိင်တံကိုလိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွရန်လက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ၌ယောနိပေးသောအရာထက်ပိုပြီးအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ကြမ်းတမ်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါဒါကိုတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်လောက်တောင်ရိုက်နှက်တာတောင်မှကြမ်းတမ်းတဲ့အပြုအမှုတစ်ခု (လိင်အင်္ဂါမှသိပ်မထူးခြားတဲ့နည်းတစ်ခု) လုပ်မိရင်တောင်မှမိမိရဲ့လိင်တံကိုအလွန်အမင်းခံစားရခြင်းကိုမကူညီနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုငါလာပြတာပါ။
ဒါ့အပြင်ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အော့ဖ်လိုင်းညစ်ညမ်းစိတ်ကူးစိတ်သန်းထဲကို ၀ င်ရောက်ခြင်းမှစိတ်ကူးယဉ်မှုကိုဘယ်လိုရပ်တန့်နိုင်မလဲဆိုတာမသိပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သောအခါမှအသုံးမချဖူးသောယောက်ျားများထက်ဝေးသည့်အဆင့်နှင့်မညီသောလိင်တံအဆင့် (နှင့်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများ) နှင့်အလုပ်လုပ်နေသောယောက်ျားများအတွက်အပတ်သည်ကျန်းမာသည်။
Reset နှင့် New ပန်းတိုင်: တစ် Fapaholic ၏ဝန်ခံခြင်း!
လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်အတွက်ရက်ပေါင်း ၃၀ NoFap ၏ပစ်မှတ်ကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ငါကလေးခြေလှမ်းများလှမ်းချင်သောကြောင့်, ငါရက်ပေါင်း 30 နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီး - ထိုသို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လုံးဝတန်ပါတယ် - ငါဟာလုံးဝကွဲပြားတဲ့လူတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်မှာတိုးတက်လာခြင်း၊ အရေပြားတိုးတက်လာခြင်း၊ ကျန်းမာရေးတိုးတက်လာခြင်းနှင့်သူငယ်ချင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်“ အခြားသူတစ် ဦး နှင့်တူပုံရသည်” ကိုမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဒီနေ့ရက် ၃၀ အတွင်းမှာကျွန်မဟာ ၄ ကြိမ် (တူညီတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ၃ ကြိမ်) ချထားခဲ့တယ်။ ငါဟာ ED ပြproblemsနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းအားကောင်းနေပြီ၊ ငါဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။
အိုကေဒါ။ ငါနင်ဘယ်မှာလဲ၊ ငါ NoFap ရက် ၃၀ ကိုဆင်နွှဲဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို porn အချို့နဲ့ဆုချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။ လွန်ခဲ့သော (၁၀) ရက်ကကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟောင်းနွမ်းခြင်းအဖြစ် / လှည့်စားခြင်း၊ ငါပြန်ပြောင်းငါလုပ်တိုးတက်မှုအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်လောက်ကငါဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါလွမ်းတယ်။ ဒီတော့ဒီဟာကိုရက် ၉၀ လောက်လုပ်တော့မယ်။ ကံကောင်းပါစေ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်ခြေထောက်မှာကမ္ဘာကြီးနှင့်ကျွန်တော့်ရှေ့မှာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများပါ။ ငါကအားလုံးကိုဝေးမှေးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ရက်ပေါင်း 30 ။ အကြှနျုပျ၏အသွင်ပြောင်းယခုစတင်သည်။